Montreal Clock Tower Beach 2017 Daty sy Sarany (Port Altier)
Montreal Clock Tower Beach 2017 Daty sy Feo
Ny Tower Clock Old Tower: Ny tanànan'i Another Urban Beach ao Montreal
Ny fampisehoana farany amin'ny torapasik'olona marobe ao Montreal dia ny Montreal Clock Tower Beach, 1.3 hektara (3.2 hektara) any an-tanàn-dehibe izay nipoitra tamin'ny taona 2012 tao Old Montreal , toerana izay ahitan'ny mponina sy ny mpitsidika azy any amin'ny masoandro na ambanin'ny tany fampiononana amin'ny seza lava lava. Ny Tilikambo Fiambenana ao Montreal Clock Tower 2017 dia misy daty sy tarehimarika voatanisa eo ambany. Ary mitazà horonam-peo mba hijery ny sarin'ny kianja.
Montreal Clock Tower Beach 2017: Swimming amin'ny 2017?
Ny Montreal Clock Tower Beach dia tsara tarehy tahaka ny fijery any amin'ny faritra, mijery ny Port Alt amin'ny lafiny iray ary ny Parc Jean-Drapeau manintona toy ny La Ronde sy ny Biosphere amin'ny andaniny.
Teny tokana iray monja tokony hotadidinao: tsy misy filaminana izany. Tsy sahala amin'ireo tora-pasika maro eran'izao tontolo izao, tsy misy ny fahamendrehana azo atao ao amin'ny Clock Tower Beach Old Port noho ny olana ara-pahasalamana, ny code ho an'ny kalitaon'ny rano ambany (izay miady hevitra) sy ny filazana mahery vaika. Na izany aza, nokolokoloina hiova izany, ny lapan'ny tanàna tany am-piandohana dia nanamboatra toeram-pialambolin'ny seranan-tsambo ho an'ny tanànan'i Montreal tamin'ny faha-375 taonany tamin'ny taona 2017 izay nahafahan'ireo vahiny nitsangatsangana. Saingy ny fanorenana dia tsy nanomboka tamin'ny lohataonan'ny 2017 ary tsy misy teny hoe rehefa averina averina.
Mandritra izany fotoana izany, ny moron-dranomasina dia misy toeram-piantsonana, kianja, sanga ary bar iray manodina olombo-drongony ary koa ireo zava-pisotro tsy misy alkaola sy snacks.
Montreal Clock Tower Beach 2017: Araraoty ny Fireworks
Ny Clock Tower Beach dia tsy natao fotsiny mba handefasana masoandro. Manolotra sehatra fijerena loha-hevitra izy mba hisamborana ny fifaninanana Firewalls International Montreal . Saingy ny fahafantarana ny habetsahan'ny vahoaka miangona ao amin'ny Port Altes amin'ny alina miaraka amin'ny fandroana amin'ny ankapobeny, ny fanantenana eny amoron-dranomasina dia tsara omena adiny roa farafahakeliny aloha, amin'ny fandinihana ny faritra hahatratra ny fahaiza-manao feno amin'ny 800.
Hira: Fireworks Montreal 2017 Summer Schedule
Fandaharam-potoana: 2017 Season Daty
Tsy nisy daty navoaka ho an'ny 2017 ny Montreal Clock Tower Beach ary hatramin'ny nisakanana ny lalantsara tamin'ny 2016 tamin'ny alalan'ny fitokonan'ny mpiasa iray, ny ora farany amin'ny asa an-tsoratra dia hatramin'ny taona 2015. Ho an'ny hevitra vitsivitsy momba ny zavatra andrasana amin'ny 2017, eto dia ny endriky ny fandaharam-potoana no toy ny fotoana farany nipetrahan'ny tora-pasika:
27 Mey ka hatramin'ny 11 jona 2017: Asabotsy sy Alahady nanomboka 11 am hatramin'ny 9 alina
Hatramin'ny 16 Jona ka hatramin'ny 4 Septambra 2017: Alatsinainy hatramin'ny Alarobia nanomboka tamin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 7 ora hariva, ny Alakamisy ka hatramin'ny Alahady nanomboka 11 am a 9 pm
Ara-potoana ora 11 ora hatramin'ny 9 alina
Fireworks alina : 11 am hatramin'ny 11 alina
Manomboka amin'ny 8 septambra ka hatramin'ny 27 septambra 2015: faran'ny herinandro 11 ora hatramin'ny 9 alina
Adiresy: 2017 Season Rates *
Ny vidin'ny 2017 dia $ 2 isam-bolana talohan'ny 7 alina. Ny vidin'ny fetiben'ny alina aorian'ny 5 hariva dia olona 5 isa (18 taona fotsiny ihany). Mandalo ny $ 15 (fialan-tsasatra ny $ 2 amin'ny faran'ny fizaran-taona). Ny sanda ho an'ny taona 2015 dia eo ambany (indray, tsy misy ny sandan'ny 2016 satria nakatona ny toeram-pivarotana amin'ny fitokonan'ny mpiasa). Salsafolie Alahady $ 6 isam-bolana (ankizy miarahaba).
Tsy sahala amin'ny vanim-potoana 2013 sy 2014 rehefa nafahana ny fahafahana, ny Clock Tower Beach dia nametraka saram-pidirana maivana ho an'ny vanim-potoana 2015: $ 2 ho an'ny 13 taona sy mihoatra, maimaim-poana ho an'ny 12 taona sy ambany. Ny dimy tamin'ny dimy andro alina. Ny Beach ihany no misokatra ho an'ny 18 taona sy amin'ny 8 ora hariva
Ny zava-pisotro tsy misy alkaola (rano, sokatra, soda, zava-pisotro mahery) dia eo amin'ny $ 3 hatramin'ny $ 5. Ny zava-pisotro misy alikaola dia miovaova arakaraka ny vidin'ny divay amin'ny $ 8 sy ny cocktails amin'ny $ 9. Ny sakafo eo an-toerana dia nampidirina ny sandwiches ary ny alika salady Euro avy amin'ny $ 10 ka hatramin'ny $ 14, salady manomboka amin'ny $ 7 ka hatramin'ny $ 9, salady voankazo manomboka amin'ny $ 4 ka hatramin'ny $ 6, pizza focaccia miaraka amin'ny salady amin'ny $ 10 sy satay skewers (pork, chicken, beef) amin'ny $ 2.50 per brochette. Ny zavatra sy ny vidin'ny meno dia mety miova tsy ampoizina.
Tsy misy tavoahangy glasa azo aleha.
Tsy misy zava-pisotro misy alikaola any ivelany.
Fitafy fandroana mifanentana mifanaraka (eg, ny akanjon-damba dia tsy fandroana fandroana).
Ny zazakely dia tsy maintsy manana fanindroany amin'ny farany.
Ny vahiny dia afaka mitondra ny sezany lava.
Ny lozam-bolo sy solontenan'ny masoandro na zavatra hafa izay mety hijanona ao amin'ny fasika dia voarara satria afaka manimba ny membrane eo ambany fasika.
Tsy azo ampiasaina eo amin'ny toeram-panorenana ny baolina, ny bikabika, ny baolina ary ny karazan-damba hafa rehetra.
Any ivelan'ny faritra mifoka sigara, voarara ny fifohana sigara.
Ankoatra ny hetsika manokana nokarakarain'ny besinimaro, ny fampiasana feo am-boalohany sy / na zavamaneno dia voarara eo an-toerana.
Ny fiaramanidina an-tserasera, skateboarding and cycling is forbidden on the site.
Tsy nahazo alalana hiditra ao amin'ny faritra misy ny tendron'ilay trano ny tsy ampy taona, raha tsy misy ny mpiambina iray / mpangalatra amin'ny vanim-potoana ara-dalàna na raha tsy hoe mandeha amin'ny fizarana izany fizarana izany ny fampisehoana orana, toeram-pivoahana na hidirana sy eny amoron-dranomasina. Ny tsy ampy taona tsy ampy taona dia mihoatra noho ny fandraisana azy ireo hankafy ny trano ao amin'ny faritra maniry eo ambonin'ny tranon'omby, miatrika ny Yacht Club.
Tsy mahazo alalana any amin'ny moron-dranomasina ny minisitra aorian'ny 8 tolakandro
Montreal Clock Tower Beach: Fitoriana any
Valan-tseranana voavidy eo amin'ny toerana.
Montreal Clock Tower Beach 2017: Attractions Attractions
Mandeha any amin'ny Tower Clock Beach? Azonao atao ny mandany andro aman'alina ao amin'ny faritra. Raiso ity trifecta ity, ohatra. Sipa eo amin'ny vera misy loko ao amin'io barazy io eo akaiky eo , mihinana ny sasany amin'ireo seafood tsara indrindra ao an-tanàna amin'ny alalan'ny mpifanolobodirindrina ary mijery ireo karazana homegrown sasany sy ireo fivarotana fanomezana eny an-dalambe avy amin'ireo toerana mafana rehetra eto , izay mandeha 10 minitra miala avy any amoron-dranomasina.
Jereo koa: zavatra lehibe tokony hatao ao Montreal fahiny
Mitady namana akaiky kokoa? Ny ivon-toeram-pikarohana Science Montreal sy ny fampiratiana ny ankizy ary ny fisehoana IMAX dia eny amin'ny rano ihany koa. Mandehana fotsiny eo atsinanana mandritra ny 10 minitra. Tsy azonao an-tsaina izany. Ary tandremo tsara ny toerana misy ny BeaverTails ao anatin'ilay tranobe misy ny Centre Science.
Rehefa vita ny dia, mandehana miantsinanana mankany Pointe-à Callière , tantaran'ny mozean'i Montreal sy ny arkeolojia. Tsy vitanao koa ny mahita fa Pointe-à Callière dia hatsaran-tarehy avo lenta hita avy amin'ny Science Center. Na manalavitra ny rano sy ny lalana eo an-tokotanin'ny Old Montreal mba hahatongavana any amin'ny iray amin'ireo fiangonana mahafinaritra indrindra any Amerika Avaratra , dia hahita maso maloto ny maso. Tsidiho ary azonao eritreretina fa nisy olona nitondra anao tany Paris.
* Mariho fa ny vidin-tsakafo, ny sakafo ary ny fisotroan-drongony sy ny ora fiasàna dia mety hiova tsy am-pisalasalana
Montreal Fitness: Toeram-piofanana, Classes & Aktivite ho an'ny Taste rehetra
Fiovan'ny fotoana: Oviana? Nahoana?
Zava-miafina hatao any Montreal ny volana May 2018
Sakafo mahazatra Montreal: Ahoana no fihinana eo an-toerana sy ny antony
Ny fomba hitsidihana an'i Munich amin'ny teti-bola
Cambridge, Maryland - Torolalana ho an'ny mpitsidika
Momba ny Golf Travel Guide ho an'ny fandaharana gila sy toby any West Palm Beach
Find a Zip Code Zip Code
London to Aberdeen amin'ny Train, Bus, Car ary Air
Torolalana ho an'ny Woolwich Ferry
Fabulous Las Vegas: Magnet amin'ny Travel Travel amin'ny World Best Service
Torolalana ho an'ny paroasy 2nd tany Paris
Toeram-pisotroana kafe ao Phoenix miaraka amin'ny mozika mivantana
Pinocchio dia nahatsiaro - Collodi sy Vernante Italia
Ny tsara indrindra any Soeda